Soomaaliya & Azerbaijan oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah | Banaadir Times
HomeWararSoomaaliya & Azerbaijan oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah
Safiirka dowladda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Amb. Jaamac Ceydiid Maxamed iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa safar shaqo ku tegay Magaalada Baku ee Caasimadda dalka Azerbaijan.
“Annaguna dhankayaga waxaanu uga mahad celinay sida fiican ee uu noo soo dhoweeyey. Waxaan u gudbinnay fariinta dawladda Soomaaliya ee ku aaddan xiriirka labada dal oo ah: Walaaltinimo, is qaddarin iyo iskaashi isu dheelitiran. Waxaan xusnay xidhiidhka soo jireenka ah ee walaaltinimo iyo dhaqan ee labada dal ka dhexeeya” ayuu yiri Safiirka Soomaaliya ee Turkiga.
Previous articleCiidamada Dowladda oo sameeyay howlgal Miino baaris ah
Next articleWafdi gaaray Magaalada Beledweyne & kulamo ka bilaawday